Ubuntu touch OTA-14 iza nezithuthukisi zokuxhaswa kwehardware nokuningi | Kusuka kuLinux
Ubuntu touch OTA-14 ifika nokuthuthukiswa kokusekelwa kwehadiwe nokuningi
Iphrojekthi ye-UBports (ethathe ukwenziwa kwepulatifomu yeselula ye-Ubuntu Touch ngemuva kokuthatha umhlalaphansi kweCanonical) kwethulwe muva nje, ukukhishwa kwesibuyekezo esisha se-Ubuntu Touch OTA-14 firmware, yawo wonke ama-Smartphones namaphilisi asekelwa ngokusemthethweni eza ne-firmware esekwe ku-Ubuntu.
Lokhu kukhululwa okusha kusekelwe ku-Ubuntu 16.04 (Ukwakhiwa kwe-OTA-3 kwakususelwa ku-Ubuntu 15.04, futhi kusuka ku-OTA-4, kudluliselwe ku-Ubuntu 16.04).
Uhlobo olulandelayo lulindelekile (I-OTA-15) thutha usuka ku-Qt 5.9 uye ku-5.12, ezosebenza njengesisekelo sokuthuthuka okuzayo kwezakhi ze-Ubuntu 20.04. Le phrojekthi iphinda ithuthukise itheku lokuhlola ledeskithophu ye-Unity 8, ebizwa ngeLomiri.
1 Izindaba eziyinhloko ze-Ubuntu touch OTA-14
2 Thola Ubuntu Touch OTA-14
Izindaba eziyinhloko ze-Ubuntu touch OTA-14
Ngesikhathi sokulungiselela ukwethulwa, ukugxila ikakhulukazi kumadivayisi ahambisanayo ithunyelwe ngeplatifomu ye-Android 9 (ikakhulukazi ekufudukeni komshayeli).
Okwezinguquko ezigqamile kwe-OTA-14 entsha yi- kungezwe ukusekelwa kwamakhamera amasha, kanye nokuboniswa kwangaphandle okuhambisana ne-HardwareComposer2.
Futhi, Ukuzimisela okulungile kwemingcele yokubonisa yamadivayisi asuselwa ku-Android 9 sekuqalisiwe. Ukuthwala kwenziwa ngokuxhaswa nguVolla, osebenzela ukudala i-smartphone esekwe ku-Ubuntu Touch futhi uhlose ukuqasha abathuthukisi ukuthi babambe iqhaza ekwakhiweni kwe-Ubuntu Touch.
Izinkinga ezilungisiwe ngokuqondisa kabusha umsindo kumadivayisi we-Bluetooth lokho kwenzeke ngesikhathi sokuxhuma kabusha. Isibonelo, manje usuzoqhubeka nokulalela i-podcast enomsindo ophuma ohlelweni lwe-infotainment yemoto ngemuva kokunqamula futhi ubuyela emotweni.
Umsebenzi wenziwe lula ukusebenzisana kwencwadi yamakheli kanye nohlelo lokuthumela imiyalezo.
Ukulungiswa kwenziwa ukuhlanganisa isoftware ye-Ubuntu Touch kokunye ukwabiwa okufana ne-postmarketOS.
Isikrini se-splash esiboniswa lapho uxhuma amadivayisi wangaphandle siyefana nesitayela sezinye izinhlelo zokusebenza.
Izingxoxo zeLomiri UI Toolkit (Unity 8) zisekela ingqikithi emnyama.
Into ezothatha izithombe-skrini ingeziwe kwimenyu ekhonjiswayo lapho inkinobho icishiwe icindezelwe.
Ekugcineni, izinhlelo zekusasa, isinqumo sithathwa, kuqala ngokukhishwa kwe-OTA-16, ukumisa ukusekela injini ye-Oxide web engasasebenzi (kususelwa ku-QtQuick WebView), osekuyisikhathi eside kwafakwa injini entsha esebenzisa i-QtWebEngine, lapho zonke izinhlelo eziyisisekelo ze-Ubuntu Touch zidluliselwe khona, kepha ezisasetshenziswa ezinhlelweni zenkampani yangaphandle.
Injini ye-Oxide ayikabuyekezwa kusukela ngo-2017 futhi iyingozi ngenxa yokuba sengozini kokungafakwanga.
Ukuqedwa kwe-Oxide kuzoba ukuphela kwenkathi, kepha kudingeka kakhulu: injini ayikaze ibe nokuvuselelwa okusemthethweni kusukela ngo-2017. Akuphephile ukuqhubeka nokusebenzisa injini kuwebhu engathenjiwe, futhi igcinwe isebenza kuphela zonke izicelo ezinikezela ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi ezinjengeDekko 2 namanothi wohlelo lokusebenza, bengizidinga.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo ekukhipheni lesi sibuyekezo esisha se-firmware, ungavakashela isixhumanisi esilandelayo.
Thola Ubuntu Touch OTA-14
Isibuyekezo senzelwe i- I-OnePlus Uno, i-Fairphone 2, i-Nexus 4, i-Nexus 5, i-Nexus Julayi 2013, i-Meizu MX4 / PRO 5, i-VollaPhone, i-Bq Aquaris E5 / E4.5 / M10, i-Sony Xperia X / XZ OnePlus kanye ne-3 / 3T Smartphones. Uma kuqhathaniswa nenguqulo yakamuva, ukwakheka kwemihlangano ezinzile sekuqalile kumadivayisi we-Xiaomi Redmi 4X, Huawei Nexus 6P kanye ne-Sony Xperia Z4.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ubuntu touch OTA-14 ifika nokuthuthukiswa kokusekelwa kwehadiwe nokuningi
I-CRIU, uhlelo lokonga nokubuyisa isimo sezinqubo ku-Linux